Isbitaal carruur oo laga furay Hargaysa - BBC Somali - Aqoon Guud
Isbitaal carruur oo laga furay Hargaysa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 Janaayo, 2013, 21:53 GMT 00:53 SGA
Isbitaalkan cusub oo ku dheggan cisbitaalka guud ee Hargeysa waxaa dhismihiisa iska kaashaday Dr Maxamed adam sheekh oo ahaa dhakhtar caan ahaa oo Soomaali ah iyo dawladda.
Isbitaalka cusub ee Hargaysa ee carruurta iyo hooyada.
Magaalada Hargaysa munaasabad ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland Cabdirxmaan Maxamed Cabdillaahi, Marwada Madaxweynaha Aamino-wersis Sh. Maxamed, wasiiro, dhakhaatiir isugu jira soomaali iyo ajenabi, iyo marti sharaf kale ayaa rasmi ahaan loogu furay cisbitaal cusub oo ah cudurada caruurta iyo haweenka oo loo bixiyay Dr Maxamed adam Sheekh.
Cisbitaalkan cusub oo ku dheggan cisbitaalka guud ee Hargeysa waxaa dhismihiisa iska kaashaday Dr Maxamed adam sheekh oo ahaa dhakhtar caan ahaa oo Soomaali ah iyo dawladda somaliland oo dhulka bixisay.
Weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid Cige oo tegay xafladaasi ayaa wuxuu ka wareystay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr Xuseen Xoog.
Dhismaha isbitaalka cusub.